Haddii uu Muuse maanta mucaarid ahaan lahaa, Cirrona……..”. Xasan Ciise | Gabiley News Online
Haddii uu Muuse maanta mucaarid ahaan lahaa, Cirrona……..”. Xasan Ciise
Mujaahid Xasan Ciise Jaamac, oo ahaa madaxweyne-xigeenkii u horeeyay ee Somaliland, ayaa ka hadlay marxalada ay Somaliland marayso.Xasan Ciise Jaamac, oo qoraal soo saaray, wuxuu ka digay cawaaqibka ka dhalan kara farriimaha aan quruxda badnayn ee ay isweydaarsadaan taageerayaasha muxaafidka iyo mucaaradku. Qoraalka Xasan Ciise wuxuuu dhignaa sidan:
Waxa kale oon shaki igaga jirin in hadii arintu sidaasahaan lahayd ( ileyn ma muuqdaan cid u bedelilaheyd sacuudiga iyo imaaraadkuye ) inuu Ciro saxeexi lahaa heshiisyada Imaaradka ee uu imika ku canbaareynayo Muse.
Waxa la gaadhay, ayaan qabaa,wakhtigii aynu dib u eegis ku samayn lahayn nidaamkan aynu dibada kasoo qaadanay ee aynu qiimaynlahayn waxaynu ka faa’iidnay iyo wixii dhibaato ah ee uu inagu keenay, dabeetana xalka isweydiinlaheyn.